Thailandy: Fandrahonana sy Fanitsakitsahana ny Fahalalahan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2017 2:23 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra tamin'ny Aprily 2012)
Tsy antoka ho an'ny fahalalahana miditra amin'ny aterineto ny hoe governemanta voafidy tamin'ny fomba demaokratika no eo. Ohatra iray amin'izany i Thailandy..
Nitombo ny sivana atao amin'ny aterineto na teo aza ny fampanantenan'ny governemanta vaovao “hamerina ny demaokrasia” sy hitondra ny firenena ho any amin'ny firaisam-pirenena, taorian'ireo taona marobe nisian'ny fifandonana politika lavareny.
Nitombo isa ny adiresy IP voabahana [rohy amin'ny teny anglisy] sy ny isan'ny heloka informatika, nefa ny governemanta Yingluck nampanantena ny tsy hikitika ny faritry ny lalàna momba ny fanivànana aterineto – nolovaina avy amin'ny fitondràna tsy refesi-mandidy. Nampitomboina ihany koa ny tetibola ho an'ny Ministeran'ny Fampahalalambaovao sy ny Fifandraisana. Hatramin'ny nandraisany ny asany, nireharehan'ny governemanta ao Thailandy ny nahavitàny nibahana tranonkala 73 000.
Ireo mpandinika am-pahamalinana ny politikan'i Thailandy dia tsy gaga raha toa ka ny governemanta Yingluck no voalohany nankatò ireo fepetra vaovao ho fanivànana na fanafoanana bitsika naroson'ny Twitter. Any an-kafa eto amin'izao tontolo izao, toherin'ireo mpampiasa aterineto io fanapahankevitry ny Twitter hametraka teritery amin'ny fahalalahan'ny fanehoana hevitra an-tserasera io. Ao Thaïlandy anefa, tonga tamin'ny fotoana nilàny azy ilay fanapahankevitra, ny fanivànana ny aterineto efa tafiditra rahateo ao anaty fandaharanasa politikan'ny governemanta vaovao.
Toy izao no nandraisan'i Anudith Nakornthap, minisitra misahana ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampahalalambaovao ao Thailandy, ny politika vaovaon'ny Twitter .
Mifanaraka tsara amin'ny an'ny governemantantsika izy io [ilay politika] mba hiarovana ireo mpampiasa aterineto sy hanakanana azy ireo tsy hanitsakitsaka ny lalàna sy ny fepetra. Misy ny tena fahalalahana refa tsy manimbazimba ny zon'ny hafa ianao, na ireo lalàna misy eo amin'ny firenena.”
Amin'ny alàlan'ny fandaharanasany “Cyber Scout”, mandray mpirotsaka an-tsitrapo ny governemanta mba hikaroka ireo “votoaty mampididoza” sy tsy ara-dalàna ety anaty serasera
Araka ny lazain'ny Bangkok Post, tamin'ny taona lasa dia nifandray tamin'ny Facebook ny governemanta mba hibahanana pejy miisa 10.000 heverina ho mifanohitra amin'ny lalàna misy ao aminy. Tamin'ny volana lasa, niharan'ny bemidina nataon'ny polisy thailandey ny tranon'ny olona roa mpisera amin'ny aterineto, nogiazana ny solosain-dry zareo ary nesorina taminy ny zony. Tsara vintana ry zareo fa navotsotra, saingy hain-dry zareo fa niova tanteraka sy mandrakizay ny fiainany.
Ao anaty fiainana tahotra amin'ny fotoana rehetra sy amn'ny toerana rehetra, ary ny tsy fitokiana lalina an'ireo manampahefana, tsy ampy ny faharesen-dahatra hoe tsy nanao zavatra nanafintohina ny olona iray. Vehivavy iray tamin'ireo voampanga no namboraka fa natahorany ny hanaovan'ny polisy “porofo hosoka” sy hanagadràna azy, tsy noho izay nataony, fa noho ny zavatra tsy nataony.
Rehefa nandray ny entany nogiazan'ny polisy taminy izy, dia nahamarika fa niova ny anaran'ny faritra iray tao anaty kapila mafy fitondrany mivezivezy, izay nampiasainy hitahirizana ireo antontan-kevitra sy lahatsoratra politika.
“Tsy nijanona nijery azy ireo aho tamin'izy ireo nanao dika mitovy tamin'ilay kapila, satria resy lahatra fa tsy manan-javatra mety hanohintohina na afenina. Ny fanehoankevitro manokana toy ny mahazatra ahy no alefako. Fa rehefa nahita an'izay aho, tonga dia niahiahy ny polisy ho nanova ny angondrakitro,’ hoy izy nanamafy.
Nambarany tamin'ny Prachatai fa nohajainy fatratra ireo politikan'ny aterineto ary tsy mba nandray anjara taminà famoriambahoaka, na iray aza. Nohamafisiny ihany koa fa mpamaky betsaka an'ireo fanehoankevitry ny hafa izy, ary tsy mbola nandefa velively fanehoankevitra manevateva.
Kanefa, tsy ny Thailandey rehetra mpampiasa aterineto no tsy faly amin'ilay politika vaovaon'ny Twitter ao Thailandy. Nanoratra i Ohreohcorner ao amin'ny sehatra fanehoankevitry ny Blognone.com :
Toa ankamamian'i Thailandy fatratra ny sivana ka nahatonga azy haka toerana hilahatra amin'ny politika vaovaon'ny Twitter momba ny sivana.”
Mandritra izany fotoana izany, Tleknight Kmutt nibitsika hoe:
“OK, azoko hiafiana izany.”
Domoku SAd nanoratra hoe :
Samy tomponandraikitra amin'ny tenany avy ny tsirairay mpampiasa aterineto mba hanaja ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Mila mahafantatra ny fetra tsy azontsika ihoarana isika (mpampiasa aterineto).”
Ny famelezana tsy miato ny fahalalahan'ny aterineto ao Thailandy dia mifamatotra akaiky amin'ny fihenjanana ankapobeny manodidina ny fanavaozana iray mety hatao amin'ny Andininy faha 112 amin'ny Fepetra Famaizana, fantatra kokoa amin'ny hoe “andalana momba ny faniratsiràna mpanjaka “, izay mandrara ny firesadresahana / fifosafosàna ny fianakavian'ny mpanjaka. Nampahafantarin'ny governemanta Yingluck nazava tsara fa tsy hitondra fanitsiana amin'io izy ary dia niroso, nanomboka teo, taminà famoretana henjana kokoa an'ireo mpisera amin'ny aterineto, tamin'ny fanamafisana fa andraikiny ny mampihatra ny lalàna. Kanefa, na eo aza ny fanjavozavon'io lalàna io sy ny tsy fahampian'ny mangarahara manodidina ny atao hoe “heloka informatika”, raha ny tena zavamisy dia ny tahotra no volen'ny governemanta.
“Freedom Against Censorship Thailand (FACT)” (Fahalalahana Manohitra ny Sivana ao Thailandy) dia nanohitra ny fomba ataon'ny governemanta ho fanivànana ny Twitter, tamin'ny fanolorana avy hatrany fomba sy fitaovana handinganana ny sivana. Mifanindran-dàlana amin'izay koa, ny Tambajotra thaï misy ireo mpiondana aterineto dia mamaly ilay famoretana tsy mitsaha-mitombo ataon'ny fanjakana amin'ny aterineto tamin'ny famoahana tsy tapaka ny fanavaozam-baovao manazava amin'ireo thailandey mpampiasa aterineto ny fomba “hamahàna” ireo tranonkala voabahana.